चालु वर्षको विकास लक्ष्यलाई पूरा पार्न चीन प्रयासरत् - China Radio International
चालु वर्षको विकास लक्ष्यलाई पूरा पार्न चीन प्रयासरत्
(GMT+08:00) 2020-02-13 19:20:32
आकस्मिक रुपमा देखा परेको रोग चीनका लागि एउटा परीक्षण हुनुका साथै त्यसबाट विश्वको चिन्तालाई पनि तानेको छ। त्यस रोगको निवारण र नियन्त्रण गर्न चीन सक्षम रहेको छ कि छैन? चीनले चालु वर्षको आर्थिक र सामाजिक विकास लक्ष्यलाई साकार तुल्याउन सक्ने छ कि छैन? त्यसले विश्व अर्थतन्त्रका लागि ठूलो असर पार्छ कि पार्दैन?
चीनका सर्वोच्च नेता सी चिनफिङले फेब्रुअरी १२ तारिख पैचिङमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोको स्थायी परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्दै एनसीपीको परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुका साथै रोग निवारण र नियन्त्रण कार्यलाई सबल पार्ने विषयको अनुसन्धान गर्नुभएको छ। बिगत १९ दिनमा चीनको सर्वोच्च निर्णायक तहले बैठक बोलाएर रोग निवारण कार्यबारे विचार-विमर्श गरेको यो तेस्रो पटक हो।
उक्त बैठकबाट दुईवटा महत्वपूर्ण सूचना प्रदान गरिएको देखिन्छ। पहिलो, रोग अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन देखा परेको छ भने प्रतिरोध र नियन्त्रण कार्यमा सकारात्मक प्रगति प्राप्त भएको छ। दोस्रो, मिल्दोजुल्दोसँग रोग निवारण र नियन्त्रण र आर्थिक-सामाजिक विकास कार्य गर्नुपर्छ।
रोग देखा परे तापनि समस्या र कठिनाईले चिनियाँ जनतालाई तर्साएका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुटीओका महाप्रबन्धक टेड्रोस अदहानोम घेब्रेयेसुसले भर्खरै सम्पन्न विश्व अनुसन्धान र सिर्जनशील मञ्चमा आह्वान गर्नुभएको जस्तै एकताबद्ध गरौं! एकताबद्ध गरौं! एकताबद्ध गरौं!